Mpilalao Tenisy Matihanina: Nahazo ny Loka Tsara Indrindra Aho
HAMAKY AMIN'NY TENY Abua Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galoà Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabuverdianu Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Belize Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mingrelian Mongol Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tseky Tsonga Twi Tzotzil Télougou Urhobo Valencienne Vietnamianina Waray-Waray Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Édo Éwé
Nahazo ny Loka Tsara Indrindra Aho
Notantarain’i Veli Paloheimo
FIAINANY TALOHA: MPILALAO TENISY MATIHANINA
Tany Tampere, eto Failandy izahay no nipetraka, tamin’izaho mbola kely. Milamindamina any sady feno zavamaniry maitso mavana. Tsy mpivavaka ny ray aman-dreniko. Tsy nanaiky anefa ry zareo raha tsy nianatra tsara ny zanany sady nahalala fomba. Teratany alemà mamanay, dia nanao vakansy tany Alemaina Andrefana aho indraindray. Tany rahateo no nipetraka dadabenay sy bebenay.
Mbola kely aho dia efa tia spaoro. Nataoko daholo rehefa fanatanjahan-tena. Tapa-kevitra anefa aho tamin’izaho 14 taona tany ho any hoe aleo tenisy no hatao. Indroa na intelo isan’andro aho no nanao fanazaran-tena, nanomboka tamin’izaho 16 taona. Nisy mpanazatra efa matihanina nampianatra ahy, dia avy eo aho nanao fanazaran-tena irery ny harivan’iny. Be dia be ny zavatra nahafinaritra ahy tamin’ny tenisy. Nazoto be koa aho satria tiako ho hita hoe mora miala an-daharana ve aho sa tsia, dia matanjaka sa tsia. Tia niaraka tamin’ny namako aho, dia nisotrosotro indraindray, nefa mbola tsy mamo mihitsy. Mbola tsy nifoka rongony mihitsy koa aho. Ny tenisy no masaka tao an-dohako, dia io no nataoko loha laharana.
Nanomboka nandray anjara tamin’ny fifaninanana karakarain’ny ATP * aho, tamin’izaho 17 taona. Naharesy imbetsabetsaka aho, dia lasa nalaza be teto Failandy. Lasa anisan’ireo mpilalao 50 nahay indrindra eran-tany aho, tamin’izaho 22 taona.
Nitety tany be dia be aho nandritra ny taona maro, satria nifanandrina tamina mpilalao matihanina. Nahita toerana mahafinaritra be aho tamin’izany, nefa koa nahita zavatra be dia be mampalahelo. Simba be, ohatra, ny tontolo iainana. Feno olona manao heloka bevava sy mampiasa zava-mahadomelina koa eran-tany. Nisy toerana tsy azonay naleha, ohatra, tany Etazonia, satria feno mpanao heloka bevava. Nahasorena ahy izany rehetra izany. Anarany fotsiny koa mba hoe zavatra tiako no nataoko, nefa tsy tena sambatra aho.
Niaraka tamin’ny ankizivavy iray atao hoe Sanna aho tamin’izany. Nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy. Nihomehy kely aho hoe lasa tia fivavahana i Sanna. Tsy nosakanako anefa izy. Natao mariazy izahay tamin’ny 1990, ary natao batisa izy herintaona taorian’izay, ka lasa Vavolombelon’i Jehovah. Tsy dia liana tamin’ny fivavahana aho, nefa nino hoe misy Andriamanitra. Tia namaky Baiboly mantsy ilay bebenay, dia nampianariny hivavaka aho tamin’izaho mbola kely.
Nankany amin’izay mpivady Vavolombelona izay izahay roa, indray mandeha. Kari no anaran’ilay lehilahy. Nasehony ahy ilay faminaniana ao amin’ny Baiboly momba ny “andro farany.” (2 Timoty 3:1-5) Gaga be aho hoe tanteraka amin’izao androntsika izao ilay izy. Teo vao azoko hoe maninona no ratsy be hoatr’izao ny fiainana eran-tany. Izay ihany no noresahin’i Kari tamiko tamin’iny andro iny. Lasa niresaka matetika momba ny Baiboly anefa izahay taorian’izay. Hitako hoe nitombina daholo ny zavatra nianarako. Be atao foana aho sady tsy teo lava ka tapatapaka ny fianaranay. Tsy kivy anefa i Kari, fa novaliany an-taratasy daholo izay fanontaniana napetrako, anisan’izany ny fanontaniana manahiran-tsaina ny ankamaroan’ny olona. Voavaliny tsara avy tao amin’ny Baiboly izy rehetra. Lasa nihanazava tamiko hoe izao no tena resahin’ny Baiboly: Manana fikasana Andriamanitra, ary ny Fanjakan’Andriamanitra no hanatanteraka an’izany. Lasa fantatro koa hoe Jehovah no anaran’Andriamanitra, dia efa be dia be ny zavatra nataony ho antsika. Nanohina ny foko izany. (Salamo 83:18) Naniraka ny Zanany koa Andriamanitra mba ho faty ho antsika, ary izay no tena nampihetsi-po ahy. Tsy hoe fombafomba tsy maintsy nataony na dingana tsy maintsy narahiny fotsiny ilay izy. Hita kosa hoe tena tia antsika izy. (Jaona 3:16) Nianarako koa hoe afaka minamana amin’Andriamanitra aho, dia afaka ny hiaina mandrakizay ao amin’ny paradisa. (Jakoba 4:8) Te hisaotra an’Andriamanitra aho, nefa tsy haiko hoe inona no hataoko.
Nandinika ny fiainako aho, ka hitako hoe nila nitory ny zavatra inoako aho. Nianarako tao amin’ny Baiboly mantsy hoe ny manome no tena mahasambatra. (Asan’ny Apostoly 20:35) Efa lasa matihanina tamin’ny tenisy anefa aho tamin’izany, ka enim-bolana latsaka ihany no mba tao an-trano satria nandeha nanao fifaninanana foana. Lasa niankina tamin’ny asako sy ny fanazaran-tenako daholo koa ny fiainanay mianakavy kely. Tsapako hoe nila niova aho.
Nila niala tamin’ilay asako aho. Efa fantatro hoe be dia be no hiteny hoe: “Fivavahana ve rangahy no hanariana asa tsara be hoatran’io?” Tsy nampaninona ahy anefa izany satria te hahalala kokoa momba an’i Jehovah aho, sady te hiaina mandrakizay. Tsara lavitra noho izay loka mety ho azoko amin’ny tenisy izany. Tsy nivakiako loha àry izay mety holazain’ny olona. Anjarako mantsy ny manapa-kevitra hoe inona no hataoko. Ny Salamo 118:6 no tena nanampy ahy tsy hifantoka tamin’ny tenin’ny olona. Izao no voalaza ao: “I Jehovah no momba ahy, ka tsy hatahotra aho. Inona moa no azon’ny olombelona atao amiko?”
Nisy olona maromaro te hanao fifanarahana tamiko tamin’izay hoe hokaramain-dry zareo vola be aho raha manaiky ho lasa mpilalaony. Tsy hisy hahory ahy intsony raha nanaiky aho. Efa tapaka anefa ny hevitro, ka nolaviko ilay izy. Tsy nandray anjara tamin’ny fifaninanana karakarain’ny ATP intsony koa aho. Notohiziko kosa ny fianarana Baiboly, ary natao batisa aho tamin’ny 2 Jolay 1994, ka lasa Vavolombelon’i Jehovah.
Tsy hoe nisy zavatra nampalahelo be nahazo ahy, ka hoe lasa te hitady an’Andriamanitra aho. Tsy tena hoe nitady ny fivavahana marina koa aho. Hoatran’ny efa netinety ihany mantsy ny fiainako sady efa nanana ny ampy aho. Nianarako tao amin’ny Baiboly anefa hoe tsy izany fotsiny ny fiainana. Vaovao be tamiko ilay zavatra nianarako. Efa tao amin’ny Baiboly foana ilay izy fa tsy fantatro taloha. Tsara lavitra noho izay nonofinofisiko hatramin’izay izao ny fiainako. Vao mainka mifankatia sy miray saina izahay mianakavy kely. Faly be koa aho fa lasa mitovy amiko izao ny zanako telo lahy. Tsy hoe lasa mpanao fanatanjahan-tena anefa ry zareo, fa lasa Vavolombelon’i Jehovah.
Mbola tia milalao tenisy ihany aho hatramin’izao. Lasa mpanazatra amin’ny tenisy, ohatra, aho, dia mitantana toerana filalaovana tenisy. Mahavelona tsara ilay izy. Tsy ny fanatanjahan-tena intsony anefa no androatokom-piainako. Taloha aho no nandany fotoana be nanao fanazaran-tena isan-kerinandro, satria hoe te ho lasa kalazalahy amin’ny tenisy. Lasa mpitory manontolo andro kosa aho izao, dia ampiasaiko hampianarana Baiboly ny fotoanako. Resahiko amin’ny olona izay toro lalan’ny Baiboly nanova ny fiainako. Miezaka foana mifandray akaiky amin’i Jehovah Andriamanitra aho, sady miresaka amin’ny olona hoe mbola hiova ny fiainana any aoriana any. Izao aho vao tena sambatra satria ireo no ataoko loha laharana!—1 Timoty 6:19.
^ feh. 3 Fikambanan’ny lehilahy mpilalao tenisy matihanina ny ATP. Izy io no mitantana ny ligy misy azy ireo. Manao fifaninanana isan-karazany ny mpikambana ao, ary omena naoty sy vola izay maharesy. Arakaraka ny habetsahan’ny naoty azon’ilay mpilalao no itsarana hoe laharana fahafiry izy maneran-tany.
Hizara Hizara Nahazo ny Loka Tsara Indrindra Aho
ijwcl no. 5